နေပြည်တော်တဝိုက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ချို့ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ ညွှန်ကြားထား
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိ၊ ဇဗ္မူသီရိ နဲ့ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၃၀ ကျော် ကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားဖျက်သိမ်းပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက နှုတ်မိန့်နဲ့ ညွှန်ကြားထားပြီး ငါးရက်အတွင်း မဖျက်သိမ်းတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွေကို သစ်တောဥပဒေ၊ လယ်ယာမြေ ဥပဒေတွေနဲ့ တရားစွဲသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အစိုးရရုံးစိုက်တဲ့ နေပြည်တော်မြို့ကို လေယာဉ်ပေါ်က မြင်ရပုံ
တရားဝင်ဘုန်းကြီးကျောင်း ၅ ကျောင်းနဲ့ တရားမဝင်ဘုန်းကြီးကျောင်း ၂၆ ကျောင်းတို့ကို ဖျက်ပေးဖို့ အဲဒီကျောင်းတွေမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ သံဃာတော်တွေကို လယ်ဝေးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့က သစ်တောဌာန၊ လယ်/ဆည်ဌာန၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ သာသနာရေးနဲ့ သံဃာ့နာယက အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ပြောဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ ဆရာတော်တွေက မိန့်ပါတယ်။
အခု သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ဖယ်ရှားဖျက်သိမ်းခိုင်းနေတဲ့ ဇဗ္မူသီရိ၊ ဒက္ဒိဏသီရိနဲ့ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် အတွင်းက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေရဲ့ အနီးအနားမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တုန်းကလည်း သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေက သစ်တောနယ်မြေကျူးကျော်ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ချို့ကို မီးရှို့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ မိန့်ကြားချက်အရ သိရပါတယ်။
နေရပ်- Nay Pyi Daw
Feb 08, 2013 02:47 PM
ဗလီတွေကျတော့ အလှကြည့်ထားတာလား။ ငွေရလို့နေမှာပေါ့။ သာသနာတော်သန့်ရှင်းရေးဆိုရင် ဘီအက်စ်အိုင်တွေဘာလုပ်နေလဲ။
Feb 07, 2013 08:42 AM
မိုက်ရိုင်းလွန်းပါသည်။ မိမိသည် မည်သည့်နိုင်ငံ/လူမျိုးမှပေါက်ဖွား၍ မည်သည့်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည်ကို ပြန်လည်စဉ်း စားကြည့်စေချင်ပါသည်
Feb 06, 2013 11:26 AM
Kappiya OO Min
Stupid government .You are killing your own kids after giving birth them.It is better to know how to stop the pregnancy than to kill. You should not let people build those monasteries.Were you blind or lost conscious when people built the monasteries? Not 1,2,3... 26 monasteries!I do not think you guys are taking care the country and the people. You should know what you are doing .
Feb 05, 2013 08:24 PM
It is the sorrow for Buddhism.
Feb 05, 2013 05:16 AM